Ọgụgụ EKG nke Neil Armstrong n'oge ọnwa na-agbadata maka ọrịre - Blọọgụ ahụike 2022
Ọgụgụ EKG nke Neil Armstrong n'oge ọnwa na-agbadata maka ọrịre
Ọ ga-amasị gị ịnweta ọgụgụ EKG nke Neil Armstrong n'oge ọdịda ọnwa Julaị 1969 mere akụkọ ihe mere eme? Ọ bụrụ na ọchịchọ ahụ bilitere, a na-ere akwụkwọ ihe ncheta NASA na-atụghị anya ya na PR Auction.
Armstrong nwụrụ nanị n'August gara aga mgbe ọ dị afọ 82 n'ihi nsogbu ịwa ahụ obi.
Otu Armstrong EKG a na-ere na mbụ maka $12,500 azụ na 2004. Ụlọ ahịa ahịa New Hampshire amalitela ntinye ego na $200 n'oge a; A na-atụ anya na akwụkwọ ahụike ahụ ga-ere na okpukpu atọ nke ego ahụ maka ihe dịka $ 10,000, Fox News kọrọ.
A na-eji EKG ma ọ bụ electrocardiogram iji soro akara eletrọnịkị nke obi gị mepụtara iji chọpụta ọnọdụ obi obi ọ bụla. Mgbe Armstrong nọ na-ekiri nzọụkwụ ya na ọnwa, ndị ọkachamara NASA na-ekiri ihe ịrịba ama ya dị mkpa na-alaghachi n'ụwa.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọchịagha Apollo 11 dekọtara obi na-adịghị mma n'oge nzọụkwụ mbụ ya dị mkpa na ọnwa.
Mpempe akwụkwọ nke anụ ọhịa isii ahụ nwere nkọwa na-akọwa, "EKG Recordings were as Apollo 11 Commander Neil Armstrong were nzọụkwụ mbụ mmadụ na ọnwa." Ọ na-egosipụtakwa oge Ground Ground "4:13:24:28" na mbinye aka Armstrong.
Ngwongwo a bụ akụkụ nke nnukwu ụlọ ahịa ọrịre nke na-egosipụta uwe na-eyi mgbe niile nke onye otu onye na-enyocha mbara igwe Buzz Aldrin na-eyi yana onye na-ahụ maka joystick nke Aldrin na Apollo 11 onye njem Michael Collins ji.
Rụ ahịa ọnlaịnụ ga-amalite Mee 16 ma ọ ga-emeghe ruo Mee 23.